Iranian nuclear program hit by AC/DC virus | Shwekoyantaw
အီရန်မှာရှိတဲ့ Nuclear Program တွေထိန်းချုပ်လုပ်ကိုင်နေလျှက်ရှိသော computer systems သည် ထူးဆန်းစွာ တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရကြောင်း…သတင်းတစ်ရပ်ကဆိုခဲ့ပါတယ်..။တိုက် ခိုက်သော virus မှာ AC/DC virus လို့ အမည်းပေးထားပြီး worm အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်..။ထိုသို့တိုက်ခိုက်ခံရခြင်းသည်..ကြိုတင်သတင်း အချက်အလက်ရရှိခဲ့ပြီးမှ ပေါ့လျော့မှု ကြောင့် ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းလဲသိရှိရပါသည်.။
အီရန်နိုင်ငံ ရှိ Nuclear ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သော Atomic Energy Organisation ၏ scientist တစ်ယောက်၏ပြောကြားချက်အရ computer systems တွေဟာ cyber-attack ပြုလုပ်ခံခဲ့ရတယ် လို့ ဖွင့်ချပြောကြားခဲ့ပါတယ်..။ထိုသို့ တိုက်ခိုက်ရာတွင်နာမည်ကြီး AC/DC အဖွဲ့ ၏ Thunderstruck သီချင်းသည်..မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် ညသန်းခေါင်ယံ အချိန်တွင် full volume အပြည့်ဖြင့် play လုပ်ခဲ့ပါတယ်….။အဲဒီလိုထူးထူး ခြားခြားတိုက်ခိုက်ခံရခြင်းသည်..Stuxnet ဗိုင်းရပ်နဲ့ တိုက်ခိုက်ခံရ ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း..အထူး ခြားဆုံးဖြစ်ရပ် လဲဖြစ်ပါတယ်..။
ထိုတိုက်ခိုက်မှုဟာ သုတေသနပြုသူတစ်ယောက်ဆီကို Iran’s atomic energy organisation မှ လုံခြုံရေးမြင့်မားသော လှို့ဝှက် email တစ်စောင်ပေးပို့ သတိပေးခြင်း အပြီးတွင်ထူးဆန်းစွာဖြင့်တိုက်ခိုက်သွာခြင်းလဲဖြစ်ပါတယ်…။ထိုကဲ့သို့ သတိပေးမှုပေးပို့ပြီးတော့မှ တိုက်ခိုက်ခြင်ခံခဲ့ရမှုအတွက် အနည်းငယ်မျှမေးခွန်းထုတ် ဖွယ်ရှိဖွယ်ရှိပါတယ်…။ ထို သတိပေးပို့ မှု email တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုဖော်ပြရလျှင် အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်..။
“ကျွန်တော်ဟာ…ကျွန်တော်တို့ရဲ့ nuclear program လုံခြုံရေးနဲ့ပက်သက်ပြီးတော့ သတင်းအချက်အလက်တစ်ခုကို ရေးသာပေးပို့လိုက်ရပါတယ် .ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ nuclear program နောက်ထပ်တစ်ကြီမ် တိုက်ခိုက်ဖို့ ပြင်ဆင်နေလျှက်ရှိကြပြီးတော့ အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာ worm အသစ် ဖြင့် တိုက်ခိုက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်..။ အဆိုပါ ဗိုင်းရပ်အသစ်သည် ယိုပေါက်များကိုရှာဖွေပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Natanz မြို့က Nuclear စက်ရုံအပြင် Qom မြို့အနီးက Fordo ထောက်ပံရေးစက်ရုံက automation network ကို shut down ပြုလုပ်တိုက်ခိုက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်..”
အဲဒီ email ထဲမှာပဲ ” ဒီဗိုင်းရပ်ဟာထူးခြားစွာ သီးချင်းတစ်ပုဒ်ကို ဖွင့်လိမ့်မယ်” လို့ လဲပြောကြားခဲ့ပြီးတော့ အဲဒီလိုတိုက်ခိုက်ခံရမယ်ဆိုရင်လဲ Attacker တွေဟာ သူတို့ နှောက်ယှက် ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက်နေ မှုကို Thunderstruck သီချင်းနဲ့ ထုတ်ဖော်ကြေညာလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းကို လဲ ထို email ထဲတွင်အပြည့်အစုံရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်…။ထိုသို့ တိုက်ခိုက်မှုဟာ တတိယ အကြမ်းမြောက်ဖြစ်ပြီးတော့ Iran နိုင်ငံရဲ့ အညင်းပွားနေတဲ့ Nuclear ဆိုင်ရာ ပြသနာတွေ အတွက် တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ကြောင်းလဲပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်…။
ထိုတိုက်ခိုက်မှုတွင့် ဖွင့်ခဲ့သောသီချင်းဟာ Atomic Energy Organization of Iran (AEOI) ရဲ့ မူဝါဒ ဆိုင်ရာ ကိုတိုက်မှုရှုံ ချမှုဖြစ်ပါတယ်…။ယခု တိုက်ခိုက်မှုဟာလဲ 2010 ခုနှစ် Stuxnet ဗိုင်းရပ် တိုက်ခိုက်မှုအပြီး အလားတူ ပုံစံ အတိုင်းတိုက်ခိုက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်…။ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့ အစည်းကမှ မိမိ တို့လက်ချက်ပါလို့ ၀န်ခံခြင်း ၊ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသေးပါဘူး…။
နည်းပညာရှင်တွေကတော့ ယခုတိုက်ခိုက် လာတဲ့ ဗိုင်းရပ်ဟာ ရိုရှင်းပြီးတော့ ဈေးပေါပေါ open-source project တစ်ခုကိုကျော်ဖြတ် ၀င်ရောက်လာ ပြီးတော့ ထိုဗိုင်ရပ်ဟာ software အတွင်းမှာရှိတဲ့ ယိုပေါက်တွေကိုရှာ ဖွေခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုလဲ ၀န်ခံခဲ့ကြပါတယ်…။
ဒီတိုက်ခိုက်မှု အတွက် ကြိုတင်ပြီးတော့ အသိပေးပြောကြားခဲ့သော email အပြည့်အစုံမူရင်းမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်..။
“I am writing you to inform you that our nuclear program has once again been compromised and attacked byanew worm with exploits which have shut down our automation network at Natanz and another facility Fordo near Qom.
There was also some music playing randomly on several of the workstations during the middle of the night with the volume maxed out. I believe it was playing ‘Thunderstruck’ by AC/DC.”
You also see in ghostarea.net
Labels: news, virus |
Insecure Cookie Handling
Desktop phishing part:2
VMware installation with backtrack5 on Window 7
Desktop Phishing Part I : Introduction & Attacking...
Confessions of Teenage Hackers:Part I :Mafia Boy
Hackers and Hacking Games
How To Install Backtrack5from USB Drive
Things need to do after installing Backtrack 5
Using Fcrackzip on Backtrack 5
Dual Boot install Backtrack 5
Ways of Redirection!!!
helpmandruk - SQL Injection Vulnerability
Top4Android Apps To Turn Your SmartPhone Into Ha...
Kevin Mitnick - The Art of Intrusion(ebook)
Deeping in Social Engineering